Jeegaga QOYSKA KALIYA | JumaMap
Jeegaga QOYSKA KALIYA
Kaalmada kaliga ah iyo tan caalamiga ah waa taageero dhaqaale oo la siiyo qoysaska la siiyo ilmo kasta oo ku tiirsan ilmo yar iyo ilaa da’da qaangaarka iyo, xaaladaha qaarkood, ilaa da’da 21.
Jeega waxa bixisa INPS iyadoo lagu salaynayo Tusiyaha Xaalada Dhaqaale ee U Dhigma (Isee). Si loo helo gunnada, qoysasku waxay codsan karaan INPS, ama machadyada ilaalinta, laga bilaabo 1da Janaayo 2022. Gunnada waxaa bixin doona INPS laga bilaabo Maarso 2022.
Waxa suurtagal ah in aad codsato jeegga marka la gaadho Juun 30, 2022, oo weliba aad xaq u leedahay lacagihii hore ee billaha ah (laga bilaabo Maarso 2022).
Yaa codsan kara jeegga
Si aad u codsato jeegga waa inaad haysataa shuruudaha soo socda:
Dhalashada talyaaniga, ama dhalashada wadan xubin ka ah Midowga Yurub (ama xubnaha qoyskooda), ama ahaanshaha muwaadin dawlad aan ka tirsanayn Midowga Yurub oo haysta sharciga degenaanshaha Midowga Yurub ee deganaanshaha muddada dheer; ama ay yihiin kuwo haysta hal ogolaansho shaqo oo loo oggolaaday inay qabtaan hawl shaqo muddo ka badan lix bilood; ama uu yahay qof haysta ogolaanshaha joogitaanka sababo cilmi baaris ah oo loo oggolaaday inuu joogo Talyaaniga muddo ka badan lix bilood;
– ku xiran bixinta canshuurta dakhliga ee Italy;
– Joogista Talyaaniga ugu yaraan laba sano, xitaa haddii aysan ahayn mid joogto ah, ama aad haysato heshiis shaqo oo joogto ah ama waqti go’an ah oo ah ugu yaraan lix bilood.
Kaalmadu waa mid caalami ah – dhammaan gunnada dakhligu waa u qalmaan – waana horumarsan – qaddarku wuu kordhaa marka ISEE hoos u dhacdo.
Kaalmada waxaa lagu codsan karaa 120 maalmood gudahooda laga bilaabo dhalashada cunug cusub, laga bilaabo bisha 7aad ee uurka iyo ilmo kasta oo ku tiirsan ilaa 21 sano.
Carruurta da’doodu ka weyn tahay 18 ama ka yar 21, ilmaha ku tiirsan waa inuu buuxiyaa mid ka mid ah shuruudaha soo socda si uu ugu qalmo kaalmada:
o aad dhigato dugsi ama koorso tababar xirfadeed, ama koorso shahaado ah;
o qabata tababar shaqo ama shaqo oo uu leeyahay wadarta dakhliga ka yar € 8,000 sanadkii;
o uu ka diiwaan gashan yahay shaqo la’aan oo uu shaqo ka raadsado adeegyada shaqada ee dadweynaha;
o fulisa adeega bulshada ee caalamiga ah.
Marka codsiga la sameeyo, jeegga waxaa la aqoonsanayaa laga bilaabo bisha Maarso iyo xaalad kasta 60 maalmood gudahooda ee codsiga.
Jeegga waxa lagu bixiyaa crediting Iban ama xawaalad bangi oo guri ah, marka laga reebo ka faa’iidaystayaasha Dakhliga Jinsiyadda.
Kaalmadu ma saamayso dakhliga qoyska guud ahaan.
FG: wakhtiga codsiga, waxaa suurtogal ah in la soo bandhigo shahaadada Isee si loo helo jeeg saamile ah. Haddii arjiga la gudbiyo iyadoon lagu soo lifaaqin shahaadada ISEE, INPS waxay bixinaysaa oo keliya qaddarka ugu yar, iyadoon loo eegayn dakhliga.
Waafaqsanaanta kaalmada iyo kaalmada bulsho ee kale
Laga bilaabo Maarso 2022, kaalmadu waxay bedeshaa qaar ka mid ah tabarucaadka dhaqaale ee gobolka ee loogu talagalay qoysaska carruurta leh.
– Kaalmada qoyska ee keligiis ah waxay beddeshaa gunnada dhalashada ( gunnada hooyada berrito ), gunnada dhalashada ( gunnada dhallaanka ), ANF ( gunnada qoyska) iyo ka-jaryada carruurta ku tiirsan ee da’doodu ka yar tahay 21 jir.
– Kaalmada qoyska kelidu waxay ku habboon tahay dakhliga muwaadinka iyo gunnada xannaanada carruurta.
FG: haddii aad hore u heshay Dakhliga Dhalashada, gunnada qoyska waxa si toos ah loo bixinayaa.
Jilidda qaddarka jeegga
Isku xirkaan waxaad ku xisaabin kartaa jeega simulator-ka INPS: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicofigli/Simulator
Ka-faa’iideystayaasha laga saaray gunnada qoyska keligiis ah
Waqtigan xaadirka ah, qaybo ka mid ah muwaadiniinta haysta ogolaanshaha joogitaanka ee aan ahayn kuwa liiska ku jira marka la gelayo jeegga ayaa weli laga saaray. Arrin tan la xiriirta, cusbooneysiin ayaa lagu bixin doonaa boggan haddii ay jiraan wax isbeddelo ah oo ku yimid shuruudaha gelitaanka.
Si aad u codsatid, waa inaad gasho shabakada INPS: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fAssegnoUnicofigli&S=S
Ama wac 803164 (laga bilaabo talefoonka dhulka) ama 06164164 (taleefoonka gacanta) ama iyada oo loo sii marayo macaamiisha ay aqoonsan INPS https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-body -ka-adeegidda
PrevPrecedenteSuper Green Pass: sharciyo cusub ayaa dhaqan galaya laga bilaabo 6 Disembar 2021 ilaa 15 Janaayo 2022
SuccessivoFAQ – Codsiga Ilaalinta Caalamiga ahNext
757 Visite totali, 6 visite odierne
Dardaaranka Yurub ee ilaalinta ku meel gaadhka ah waa la ansixiyay
WAR MUHIIM AH Midowga Yurub wuxuu go’aansaday inuu qaato dardaaranka ilaalinta ku meel gaarka ah ee la xiriirta dagaalka Ukraine (dardaaranka 55/2001). Muwaadiniinta Ukrain, magangalyo-doon,
912 Visite totali, 6 visite odierne
FAQ – Codsiga Ilaalinta Caalamiga ah
halkee ka dhiiban karaa codsiga magangalyada? Markay talyaaniga yimaaddaan, u taga Booliska Xuduudka Waqti kasta, Xarunta Booliska – Xafiiska Socdaalka (link category Juma) Heerarka kala
992 Visite totali, 6 visite odierne